दाँत पहेंलो भएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? चम्काउन अपनाउनुस् यस्तो उपाय ! « गोर्खाली खबर डटकम
यसका लागि तपाईंले टुथब्रश र कोइला लिनुपर्ने हुन्छ । पहिला ब्रशलाई धाराको पानीमा भिजाउनुस् । त्यसपछि कोइलाको धूलो ब्रशमा राख्नुस् ।अब दाँत घोट्न थाल्नुस् । सामान्य तरिकाले गोलोगोलो घुमाउनुस् । दाँतको भित्री र बाहिरी दुवै भाग माझ्नुस् । शुरूमा अलिअलि कस्तोकस्तो लागेपनि सहनुस् । तपाईंलाई झ्याउ लाग्यो भने सामान्य
टूथपेस्ट दल्नुस् कोइलामाथि ।